१८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो टाउको काटिएको यो कुखुरो ! – Vision Khabar
। १९ चैत्र २०७४, सोमबार ११:४८ मा प्रकाशित
अमेरिकामा ७० वर्षअघि एक किसानले एउटा कुखुराको टाउको काटिदिए । तर, टाउको काटिएको त्यो कुखुरो तत्काल मरेन, १८ महिनासम्म बाँचिरह्यो । चकित बनाउने यो घटनापछि यो कुखुरो ’मिराकल माइक’ नामबाट विश्वचर्चित बन्यो । यो टाउको काटिएको कुखुरो यति लामो समयसम्म कसरी बाँच्न सक्यो ?
तर त्यो दिन करिब ४० देखि ५० कुखुरा काटिसकेपछि एउटा टाउको काटिएको कुखुरो भने मरेन । ओल्सेन र क्लाराका नाति ट्रोय वाटर्स भन्छन्, ’जब आफ्नो काम सकेर उहाँहरु मासु उठाउन लाग्नु भएको थियो, त्यहाँ एउटा टाउकोबिना पनि बाँचिरहेको एउटा कुखुरो हिँडिरहेको थियो ।’ त्यसपछि दम्पतिले त्यो कुखुरलाई स्याउ राख्ने एउटा बाकसमा राखेर थुनिदिए । तर जब भोलिपल्ट लोयल ओल्सेनले त्यो टाउको काटिएको कुखुरालाई जिउँदो देखेपछि चकित भए ।
बालककालमा वाटर्स आफ्ना जिजुबाजेबाट यो सत्यकथा सुनेका थिए । अमेरिकाको फ्रुटामा हरेक साल ’हेडलेस चिकन’ महोत्सव नै मनाउने गरिन्छ ।
वाटर्स भन्छन्, ’उहाँहरु मासु बजारमा कुखुराको मासु बेच्नका लागि आफूसँगै त्यो टाउको काटिउको कुखुरालाई पनि लिएर गए । त्यो बेला घोडा गाडीमा चढेर जाने चलन थियो ।
उनी सबैभन्दा पहिले साल्ट लेक सिटी गए र त्यसपछि युटा विश्वविद्यालय पुगे । जहाँ ’माइक’ को जाँच गरियो । टाउको काटिएको कुखुरो बाँचेको थाहा पाएपछि विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले अन्य कयौँ कुखुराको टाउको काटिदिए । यसो गर्नुको कारण एउटै थियो, त्यसैगरि अन्य कुखुरा पनि बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् ।
माइकलाई ’मिराकल माइक’ नाम होप वेडले नै दिएका थिए । उसमाथि ’लाइफ म्याग्जिन’ ले पनि कथा बनायो । त्यसपछि त लोयड, क्लारा र माइक पूरै अमेरिकाको भ्रमणमा निस्किए ।
तर त्यो रात ओल्सेनले सिरिन्ज एक कार्यक्रममा भुलेपछि अर्को सिरिन्ज व्यवस्था गर्न नसक्दा हृदयघातबाट माइकको ज्यान गयो ।वाटर्स भन्छन्, ’सालौँसम्म ओल्सेन ले माइकलाई बेचिदिएको बताउँदै आएका थिए । तर एक रात उनले मलाई खासमा माइक मरेको कुरा खोले ।’